Soosaarayaasha Thermostats - Shirkadaha Shiinaha ee Weyrarka & Warshadaha
Heerkul yar oo caqli badan
<Magaca Muuqaalka Yar ee Xaraashka heerkulka yar ee caqliga leh 7 * 11.5cm Qalabka Alaabada Caaga ah ee Nooca Caaga ah NMM-03 Muuqaal Dhererka siligga ogaanshaha heerkulku waa 2.4m. Waxay kuxiran kartaa labo god ama sedex qalabka kuleylka ah. Awoodda ugu badan ee culeyska ayaa ah 1500W. Heerkulka waxaa xukuma inta u dhaxaysa -35 ~ 55 ℃. Hordhac tilmaamaha Howlgalka 1. Saad u fidinta: Marka korontadu ku xiran tahay korantada, qalabka kuleylka ayaa is-hubin doona, tuubada dhijitaalka ah ayaa si buuxda loo soo bandhigayaa ...
Nooca Caddaynta Magaca Qalabka Qulqulka 12 * 6.3cm Qalabka Cad ee Caaga ah Nel-01 Muuqaal Dhererka siligga ogaanshaha heerkulku waa 2.4m. Waxay kuxiran kartaa labo god ama sedex qalabka kuleylka ah. Awoodda ugu badan ee culeyska ayaa ah 1500W. Heerkulka waxaa xukuma inta u dhexeysa -9 ~ 39 ℃. Tilmaamaha Hordhaca ah 1. Marka koronto yareeyaha laga shaqeynayo, heerkulka dhabta ah ee hadda jira waxaa lagu muujiyaa baarka heerkulka oo [RUN] waxaa lagu muujiyaa barta xaaladda. Cadhada kacsan ...
Qalabka heerkulka dijitaalka ah
<Magaca Magaca Soo-saaraha dhijitaalka ee 'Soosaarka heerkulka Gaarka ah 9.8 * 13.8cm Qalabka Cad ee Caaga ah ee Nel-02 Feature' wuxuu xiri karaa laba dalool ama saddex qalabka kuleyliyaha. Awoodda ugu badan ee culeyska ayaa ah 1500W. Heerkulka waxaa xukuma 0-0 99 ℃. Hordhac Bandhiga heerkulka jooji, heerkulka hada jira iyo heerkulka bilaaba wada. Saddex daraasadood oo heer kulka lagu ogaado. Wuxuu adeegsadaa guntinta microcomputer, kuleylka heer sare ah iyo kuleylka hooseeya, laba hab ...